Helicoptero cusub oo aan horey loo arag oo ka qayb qaadatey weerarkii Bin Ladin(Sawiro) – SBC
Helicoptero cusub oo aan horey loo arag oo ka qayb qaadatey weerarkii Bin Ladin(Sawiro)
Hawlgalkii military ee ciidamada kumaandooska Mareykanka ay ku qaadeen gurigii la sheegay in uu ku sugnaa hogaamiyihii Al-qaacida Osama Bin Ladin isla markaana ay ku xaqiijiyeen inay ku dileen ayaa waxaa soo baxaya warar faahfaahsan oo la xiriira qalabka military ee loo adeegsaday.
Jariirada Aviation Week ee ka faaloota arimaha la xiriira duulimaadka military-ga iyo rayidka warbixin cusub oo ay qortey oo la xiriirta diyaarado helicotar ah oo ka qayb qaadatey hawlgalkii Mareykanku ay sheegeen in ay ku dileen Osama Bin Ladin ayaa lagu xusey in diyaaradahaasi khumaatiga u kaca ee hawlgalkaasi ka qayb qaatey ay ahaayeen diyaarado aan horey loo arag oo waliba loo adeegsadey farsamadeeda technology aad u sareeya. Diyaaradahan waxaa la sheegay inay wateen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee loo yaqaan Navy Seal waxaana warku sheegayaa in farsamadoodu ay aheyd mid aan horey loo shaacin taasi oo loo adeegsadey ilaa iyo hada weerarkii Osama Bin Ladin laakiin diyaaradaasi mid ka ka mid ah kama soo laaban hawlgalkii oo waa ay ku burburey balse ciidamadii ka qayb qaatey hawlgalkaasi waxaa la xaqiijiyey in ay burburiyeen hagaaragii diyaarada gaar ahaan qaybaha dheeradka ku ah farsamada lagu casriyeeyey.
Xeeldheerayaal military gaar ahaan diyaaradaha dagaalka ayaa sheegay in diyaaradahan ay wateen qalab mucjiso ah kaasi oo ilaa iyo hada ay la yaaban yihiin ciidamada cirka ee Pakistaan kuwaasi oo sheegay inaanay ka warhelin wax diyaarad ah oo uu qabtey Raadarka oo soo galay hawada ama xuduuda dalkaasi.
Diyaaradahan waxaa la sheegay in ay ku rakiban yihiin qalab awood u siinaya inay ka dhuuntaan ama iska qariyaan raadarka, isla markaana diyaaradahan waxay kaloo awood u lahaayeen in aan laga maqal masaafo fog guuxooda marka laga tago 20 meter marka ay ku jirsadaan oo kaliya.
Ciidamada kumaandooska ee ka qayb qaatey hawlgalkaasi markii ay ka soo dhacdey mid ka mid ah diyaaradaha waxay burburiyeen sida ay sheegayaan xeeldheerayaasha military-ga in farsamada cusub ee diyaaradu ay ku dhacdo gacanta cid aan aheyn ciidamada Mareykanka.
Diyaaradahan ayaa farsamo ahaan u dhawaa diyaaradaha H-60 Black Hawk oo ay badanaa ciidamada Mareykanku u adeegsadaan hawlgaladooda laakiin waxaa diyaaradaasi waxay aheyd nooca loo yaqaan Sikorsky H-60 Blackhawk oo la sii casriyeyey, taasi oo aheyd mid aanay horey u soo bandhigin Mareykanku. Waxyaabaha dheeraadka ah ee lagu arkey diyaaradan waxaa ka mid ah marawaxado tiro badan oo dheeraad ku ah kuwa caadig ah taasi oo loo fasirtey talaabo shanqarta ama guuxa diyaaradaha lagu yarenayey.
Laakiin xeeldheerayaal kale waxay qabaan in diyaaradan Stealth Helicopter ay tahay diyaarad horey Mareykanku isagu dayeen oo ay faraha ka qaadeen oo dib loo bilaabay mashruuceeda diyaaradan oo lagu magacaabi jirey RAH-66 wuxuu ahaa mashruuc soo bilowdey sanadkii 1984-tii balse la laabay sanadkii 2004-tii sababo aan la sheegin. Diyaarada UH-60 Black Hawk helicopter oo ay farsameyso shirkada Sikorsky, www.sikorsky.com/ ee farsamada diyaaradah a ugu badan ee taaba galey ee noocyada ciidamada militay-ga waxay shaqo bilowdey sanadkii oo ay adeegsadeen ciidamada Mareykanka sanadkii 1979-kii.
Ilaa iyo waqtigaasi diyaaradan oo halkii xabo uu ku kacayo 44 milyan oo doolar waxaa adeegsada nooc kasta oo ka mid ah ciidamada Mareykanka iyagoo xiligan hasyata 1,349 xabo. Xeeldheerayaasha dhanka arimaha diblumaasiyada waxay leeyihiin ma jiri doono wax muran dhanka diblumaasiyada ah oo dhexmari kara Mareykanka &Pakistaan oo la xiriira diyaaradahan soo galey Pakistan ee hadana ka dhuuntey Raadarka taasi oo loo aaneynayo in goor horeba diyaarado fara badan oo Mareykanku leeyahay oo ah nooca sirdoonka ama nooca dagaalka oo ah kuwa aan la arki karin ay hawlgalo ka wadaan hawada Pakistaan, sida diyaaradaha wax duqeeya ee diyaarada lagu magacaabo RQ-170 stealth drone –aka ee lagu naaneyso “The beast of Kandahar” taasi oo ah diyaarad gantaalo xambaarsan oo aan laheyn pilot ama duuliye oo Mareykanku u adeegsadaan weerarada Afgaanistan & Pakistan ee ka dhanka ah Al-Qaacida & Taliban.
Sida lawada ogsoonyahay maraykanku manta wuxu garay tecnologiyad aad usaraysa balse wax iswaydin mudan inuu maraykanku isticmalo hamada pakistan oo usan ogolansho ka haysan dowlada pakistan tasna waxan u arka khalad wayn